२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ००:२८:००
सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कार्यालय नै सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कस्तो देश चलाइरहेका छन् ? यो खबरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश दिएको छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ
पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै पार्टी कार्यालयमा ‘सुरक्षा जोखिम’ छ भन्नु गैरजिम्मेवार टिप्पणी भएको बताए । ‘अहिले नेकपाकै सरकार छ, देशको सुरक्षाको जिम्मा उहाँहरूको हातमा छ, तर पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा जोखिम छ भनेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?’ उनले भने, ‘यो त निम्नस्तरको राजनीति भयो । यसले त देशकै विषयमा एकदमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यो एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो ।’
साँच्चै ‘सुरक्षा खतरा’ भए अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानको मत छ । ‘त्यस्तो खतरा छ भने उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको पार्टी मुख्यालय नै असुरक्षित छ भने उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर छ भन्ने सन्देश जान्छ, यसले कुनै नेता वा पार्टी मात्रै होइन, देश नै बदनाम भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अक्करमा ओली : न पार्टी निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा